Email 2.0 - Ngwa Richntanetị bara ọgaranya, Multimedia, akwụkwọ agbakwunyere? | Martech Zone
Tuesday, October 24, 2006 Fraịde, Ọktọba 6, 2017 Douglas Karr
Anọ m na-agwa enyi m taa, Dale McCrory. O kwuru ihe mmalite Adobe ọhụrụ, Beta nke Adobe Digital Edition.
Dabere na Adobe saịtị:
Adobe Digital Editions bụ ụzọ ọhụụ dị ọhụrụ iji gụọ ma jikwaa eBooks na akwụkwọ dijitalụ ndị ọzọ. Ejiri Digital Editions mee ihe site na ala rue na ngwa Intaneti dị fechaa, RIA. Digital Editions na-arụ ọrụ na ntanetị na ntanetị, ma na-akwado ọdịnaya PDF na XHTML.
Dale nwere na-eche echiche na nke a (na m nwere olileanya na anaghị m nká hapụ ya $ 5billion echiche)… gịnị ma ọ bụrụ na ị na-etinye adreesị ozi-e na a interface? Yabụ, nke a is email gị ahịa nke ga-eme n'ọdịnihu… Email 2.0 ma ọ bụrụ na ị ga-.
O doro anya na ohere ị nwere bụ iri nri ọ bụla ịchọrọ na igbe igbe ma ọ bụrụhaala na onye debanyere aha ya nwere ohere ịntanetị…, nyocha, ntuli aka, peeji mmekọrịta, flash, eBooks, dọkụmentị, ụda, vidiyo, wdg, wdg. O doro anya na nke ahụ bụ ụzọ anyị na-aga. Apụghị m ichere!
Tags: adobeAdobe Digital EditionBeta nke Adobe Digital Editionbeta